Gumaata-Aartii Webview Telegram
Ati jirtaafan boona
Kaanin dagadha malee
Sin dagadhu gonkumaa
Si diradheen adeema
Waan hundumaa qabda
Keessa garaa kootiitii
Harmee !! Deessee koo
guyyaas saafaa gubu
Badee biyyaa fagaadhus
Ani of keessaa sin dhabu
Harki guddisa kee
Ija natti godhee
Jiraadhu harmee koo
Jiruu keen jiraadhee
Hamma boosseee gaddite
Hamma garaan kee qooqe
Siifan jira guutuu koo
Dhalli kee siifis hoo'ee
Bara meeqa rakkattus
Anaaf dhabdee hin dubbattuu
Garaan kee duwwaa tahus
Ani quufnaan kan quuftu
Ilaammee !! Naaf jabaadhu
hin ilaaliin isa har'aa
Gaaf tokko nuuf darbinaan
Nus waan hundumaa agarra
Jettee na jabbeessitee
Abdii keenin adeeme
Karaa kee ilaalee deeme
Anis yooman maseene
Obsa kee gudunfadhee
Abdii kees boraafadhee
Abjuu kee biraan bahee
Hundaan harka galfadhe
Faarri koo Siin hin dhibu
Fuula koo ilaaltee beekta
Mufattus natti hin aartu
Dhuftee na jabeessita
Faana miila koo beekta
Ejjennaa koo safartee
Na baaseera karaan keee
Inni ati naaf ilaalte
Jabaadhuun kee kaleessaa
Abjuu natti fakkaate
Ati garuu dhugaa qabda
Har'a koo har'aa argite
Si jajus nan baasaa ree
Gatii oolmaa keetii
Dugda kee madaa sanatu
Hin badu dura kootii
tabba guddaa ol bahuuf
Dafqi gadi lolaafte
Siniin hin dagadhu dhugaa
Gatii ati naaf baafte
Haga kee baasuu baadhus
Siif garuu of hin qusadhu
Hin tuffatiin harmee koo
Hiixannaa koos fuddhadhu
Doolarra siif kaffalus
kan kee hin baasu danda'ee
Dafqa keef dhiiga keetu
Fideee asiin na gahee
Ani soofarra taa'een
Harme jedhee si jaja
ati garuu lafa teessee
Naaf laattetta kabaja
Moofaa lafa hafattee
Rooyaalii naaf hawwwita
Dhuguma Waaqaa lafaa
Kun akkamiin wal gita
waan shaniin of dibataa
Oolmaa keen baasa jechuun
Garmalee natti ulfaata
Bitaaf mirgaan jibbamtee
Naaf jettee ollaa dhabdee
Liqeeffattu hin deebiftuu
ergifattu hin galchituu
Muka mammaakaa taate
Anaaf yoom of waakkatte
Kan kee citee utuu jiruu
Isa kan koo suphitaa
Beelaaf dheebuu kee dhiiftee
Kan koo narratti argita
Gadda kan kee dhofkattee
gammachuu koo kolfitaa
Anaan rakkadhe hin jettu
sabbanni kee guutuudha
baasee hin fixu harmee koo
Kan kee oolmaan danuudha
Sobees itti hin fakkeessu
koof kee wal hin gitu
Ani baankiidhaan fuudha
Kan kee sabbata keessa
Akkam goodheen harmee koo
Kanafaan wal fakkeessaa ?
Waan dubbiftaniif Galatoomaa.
3.9K viewsDafii Kottu, 10:23
Jaallattamtoota Maatii Gumaata Aartii.
Nageenyi keenya bakka isin jirtan Oromiyaa bal'oofi Addunyaa guutuu irra bakka isin akka midhanii facaatanii jirtanitti isiniif haa baay'atu.
Gumaatni Aartii akkuma maqaa isaa Aartii Oromoo guddisuuf tattaaffaachaa akkuma ture. Ammas bifa haaraadhaan Qophilee bashanansiisoofi barsiisoo ta'an guurratee dhufaa waan jiruuf itti bashananaa irraa baradhaa. Aartiin gola hundumaa seena,maarree nutis gola hundumaa seennee akka bashanantaniif irraa barataniif akkasumas guddina afaan keenyaaf waan qabnuuf waan dandeenyuun dhufaa jirra. Nu Hordofuu hin dagatiinaa.
Seenessa Gaggabaabaa lamaan Haadha Ormaafi Dachee toora tooraan akkasumas Walaloo garagaraa,Xalayoota keessan,Seenaawwan barsiisoofi mammaksota tokko tokko isin biraan gahaa ture ammas ittuma jira.
Maarree Sanbata Gudaa/Dilbata guyyaa boqonnaa keessanii Ganama Dachee.
Wiixata barii Guyyaa hojii keessan eegaltan Haadha Ormaa sagantaadhaan qabannee isiniif waan dhihaannuuf nurraa hin hafiinaa.
Yaada keessan bakka tokkotti walitti qabnee deebii barreeffamafi hojiidhaan argisiifamu waan isiniif kenninuuf qeeqa,yaada,jajjabina yoo qabattan nuun gahaa.
3.6K viewsDafii Kottu, edited 21:34
Seenessa Gabaabaa Kutaa 10ffaa
.... Gammachuuf Gaddaan akka Dhallaadduu bishaan keessaan holladhe. Utuman bilbila koo hin cufiin "yaa Waaqayyoo dhugumaa moo na sossobu" jedheen isan garaatti yaade afaanii baafadhe. "Lakkii Obbolleesso dhugumaa hin sobne yeroon gara isheetti deebi'u milikitan siif godha" naan jedhe. Baay'een gammade. Tole jedheen bilbila koo cufadhe.
Miira Gammachuutiin waanan liqimfameef akka ol utaaluu ta'aa dabtara yaadannoo kootii fudhadheen fiigaa gara doormii kootitti gale. Yoo ani doormii seenu haalli hiriyyoota kootti haaraa tahee,Obsaa !!! Maal argatte har'ammoo sitti tolee jira jedhan natti qoosan. Dhuguma anattis natti tolee jira.
Kanumaan utuun jiruu turtii sa'a tokkoo booda bilbilli naaf bilbilame;akkuma inni iyyeennan dafee kaase. Gurra koo biraan utuun hin gahiin Sagalee Siddisee kootii "Obsii" jedhee gurra koo irraa dubbatte. Akka waanan bira jiruttan itti marme. Garaa koo guutuun ishee dhudhungadhe,nan gammade,nan boo'e. "Jirtaa Obsii koo,ammayyuu akkuma gaafan bareeduu,akkuma gaafan si bira jiruu sana na jallattaa ? Akkasuma na mararfattaa ? "Nan jette.
Eyyen Siddisee koo isa gaafa ati na bira jirtu caalaa garaan koof keessi koo si jaallata. Si malees nama biraa kan naaf nahuuf kan naaf dubbatu hin qabu Siddisee koo sin jaalladha jedheen irra deebi'ee waadaa galeef. Na eebbifte. Eessa jirta?,maal keessas jirta ? jedhee gaafannaan. "Obsii koo jiruus jireenyas maalan qaba maaliif gaaffii akkanaa na gaafatta ?" Jettee boossee hirqinfachuu irraa kan kahe natti himachuu dadhabde. Suuta of jabbeessaadhuma "barnoota kee deemtee eegaltee ?" Jette. Eeyyeen ani eegaleen jira bakka jirtu natti himi jennaan "lakkii hin himu rakkina guddisuuf,gadadoodhaaf kan koo qofti nu gaha. Garuu waan tokko sitti irra deebi'ee si yaadachiisuun barbaada. Adaraa gaafa of jijjirte nan gatiin !; Ani yoomiyyuu siif ofan eeggadhaa, yeroo biraas bilbileen si hubadhee ammaaf nagaatti " jettee bilbila na harkatti cufte. turi ! turi Siddisee maaloo na dhaggeeffadhu utuman jedhuu bilbilli cufame.
Kan duraanii Caalaa jireenyi koo guutuun yaadaaf yaaddoodhaan burkutaa'e. Ani mooraa Yuunivarsiitiif barataa haaraa waanan tureef haalli hundumtuu natti cime. Jireenyi koo guyyaa guyyaan jijjiramaa dhufe. Nama waliin jiraachuu caalaa qofummaan natti urgaahe. Dubbisuuf yeroon karoora baafadhu yaada isheetu dhufee Asiif achi na oofa. Isheen akka yaada isheef akkan yaadaan hin miidhamneef haala keessa jirtuuf bakka keessa jirtu na dhoksaa turte. Ani garuu yeroo ammaa kana Jaalalan isheen miidhamuu koo caalaa, Siddiseen firaaf aantee,haadhaaf abbaa,obboleessaaf obbolleettii biraa dhabuufi qofaa ishee galaana rakkinaatiin raafamaa jiraachuu isheetuu namummaa koo na hir'ise.
Xiqqoo hafuura baafadheen deebisee bilbileef kaasuu didde,irra deebi'ee bilbillaan kaaftee; utuun hin dubbatiin "Obsaa Ani akka ati muddamtuuf miti kanan siif bilbile,fayyaa tahuu koof abdiidhaan si eeggachaa jiraachuu koo sitti himachuuf malee" jetteen. Lakkii Siddisee ani yoomiyyuu waadaan siif gale hin diigu,waadaa biraan itti siif dabala malee;amma garuu waan tokkicha akka ati natti himtun barbaada,bakka jirtu natti himi jennaan xiqqoo calliftee "ani bakkan jiru sittan hima,garuu haalan keessa jiru dhageessee akka hin jeeqamne waadaa naaf gali "jette. Tole rakkoo hin qabu atumti natti himi maleen jedhe.
"Ani ergan guyyaa gaafan mana keessanii baheetii mana bulee hin beeku,alan bula,qorratuu na dhaana,guyyaa guyyaa hojii humnaa hojjedheen ittiin daabboo bitadhee nyaadha. Mana namaa galuuf yeroo ani dhaqee gaafadhu,garaa koo ilaalanii of dadhabduudha dandeessee hojiii hin hojjattu naan jedhu. Yoo ani kadhadhus si gargaarra moo nu gargaarta naan jedhu. Obsaa koo utuun rakkina koo hin jibbiin garaa koo ofirratti jibbe. Garaan koo nama na jibbisiise. Amma kunoo magaalaa Giddaan jira. Xiqqoo kan geejjibaaf tahu walitti qabadheen gara Naqamteetti ol baha." Naan jette. Garan itti deebi'uuf waanan jedhun walaalee. "Utuun rakkina koo hin jibbiin garaa koon ofirratti jibbee" inni isheen jettee mari'imaan koo na waade.
3.1K viewsDafii Kottu, edited 20:29
Ayyaana Worra Hayyuu
Saba Gurraacha Guddicha Afrikaa Utubaa Sirna Gadaa Mallattoo Araaraa
Wol geettii Miliyeenotaa boonsaa Afrikaanotaa
Baayyee Si jaalataa
hin baddu yoomiyyuu
Ittuu caaltee guddattaa
taatee maraaf iftaa
kan Si dura dhaabbatu
ofii isaatii badaa
ni badaa hin shakkin
kan Si dura dhaabbate
karaatti bawuu jiraa
Darsa isaa baafatee
Ayyaana Worra Guddaa
Ayyaantu keessa jiraa
Kan humna qaba jedhee
Didee dura dhaabbate
WAAQNI kokkeesaa qabee
Darbata nu fuulduraa
WAAQATUU nu baayisee
Nu uume Dachiirrattii
akka waan gootaraa
Nyaachiftee nu obaastuu
Diinni maaf nu dadhabdii?
Qe'ee isaanii hin dhaqnee
Qe'ema keennarratti keessummaan qe'ee keetti Sitti dhuftee wonta kee jibbitu falfala malee
falaa miti falfala immoo falatu baasa
2.7K viewsMiixuu Harmee, 18:49
Seenessa Gabaabaa Kutaa 11ffaa
....Garaa nama qe'ee diiguus ta'a,akkam jettee itti haa himtu ?. Akkaataa du'a haadha isaa itti himuu caalaa gaaffii kana irra deebi'ee gaafachuun isaa ammas madaa kan biraa isheen dagattee jirtuuf gara fuula duraatti rakkina mudachuu danda'u yaaddee dubbiin afaan ishee qabate.
Falmataan mucaa qalbi qabeessa waan taheef,haasaa Akkoo isaa yaadaan dhageeffataa ture. Dubbii ishee hundaas yaadaan qabateera. Ammas irra deebi'ee "Akkoo naaf xumuri kaa garaa koo cibsadheen ta'aa" jedhe.
Akkoon isaa Aadde Dhibbiseen ammaa yaadaan boolla meeqa seentee baate. "Yoo ani dubbiin garaa kootti qabadhee taahu kana itti himuu manni ni diigama, daa'immaan diina waliif taati kanaafuu mala maalii malee gara biraatti jijjiiruu jette. Hoomaa mala biraas dhabdee.
"Falmii koo maal ta'a yoo dhiifte maaliif ana akkoo kee mudditee garaa koo madeessita,ana kan harrii mataa natti baasee jireenya koo gadi adeemsise waanuma ati na gaafataa jirtu kana adaraa kee dhiisi haa hafuu,Falmaa koo kan hafetuu Caalaa " jettee kadhatte. Lakkii akkoo dhagahuun qaba jedhee dirqamaiise
Kan kufe jigee haa dhangala'u isheen iyyuu kan lubbuu mucaa kootii galaafattee ammas daa'ima isheetti deebitee jireenya isaatti taphachuuf albee itti qarattii ittan hima een ittan hima. Yaada isheetti gumgumti. "Falmii koo akkuman dura siin jedhee mucaan durbaa isheen Danda'een koo na adamsiti jettee sodaataa turte kunii duraan yeroo Olumaan abbaan kee Danda'ee koo waliin wal hin bariin dura Olumaa Jaallataa turte. Baay'ee isa jaallatti jedhan Danda'een koo kana hin beektu utuma wal jaallataa jiranii gidduudhaan Danda'ee baree amalliif kuttannoon ishee waan itti toleef akkuma bareen fuudhuuf Jaarsa ergate.
Sana booda intalli inni jaallataa ture kun Mucaa kootti ilkaan qaruu eegalte jedhan. Mucaan koos natti himachuu sodaataa turte malee utuu isaan wal fuudhan gaa'ela waliin hin ijaarratiin iyyuu yeroo baay'ee hidhii itti cinniinnachuu irra darbee,afaanii baafattee "utuun ija koon ilaaluu isa jalatti hin haftu" jettee itti dhaadataa turte jedhan.
Maarree Falmii koo kanuma irraa kan kahe guyyaa hundumaa utuma fucha eeggattuu guyyaa isheen si fudhattee deemtu sana qophaatti argattee faana buute jedhan. Jedhanii qofaa utuu tahee aniyyuu nan shakka. "Harmee intalli sun na faana jirti, jireenyi koo natti tolaa hin jiru " jettee ofii isheetiin Danda'een koo natti bilbilattee turte. Xiqqoo turtee akka waliin taphataniif akka waliin burraaqan natti himtee jennan garaan koo aara galfatee ture.
Waliin taphachuun ishees gaarummaa itti fakkaate malee mucaa koo galaafachuuf jettee Haati Dandeessuu imimmaan qabachuu dadhabdee harqitee boo'uu eegalte. Falmataanis imimmaan inum calala. Warri konkolaataarra waliin turan ergasii waan tahe dhoksaadhaan nutti himani.
Isa wal beekus tahe inni wal hin beekne yoo konkolaataa keessatti wal bira taa'e waan nyaatu yoo bite wal hin dhowwatu. Intalli sunis waan nyaatamu bittee lama wal biratti qabattee tokko Summii itti gootee Mucaa koof irraa kennaa tokko immoo ofii ishee nyaataa deemti jedhan. Naamnis akkuma kooti jettee yaaduu isheeti kana ishee godhe malee utuu nama tahee kana ta'aa" jettee Falmataatti himte.
Falmataan ammas "Akkoo eenyu ree isheen,amma eessa jiraatti" jedhe. Hortuudha Haadha kee ishee ati harkaa nyaataa turte jette. Falmataan utuma Akkoo isaa ilaaluu Teessoo irra taa'u irraa lafa dhahe.
Yaada akkasumas qeeqa yoo qabaattan @GumaatAartiiBot nuun gahaa.
3.1K viewsMiixuu Harmee, 21:11
Haa gahu nagaan koo bakka ati jirtutti Harmee koo ishee baadiyyaa magarisaa biyyaa gadi fagoo qe'ee Dhugumaa Jaldeessaatti kan argamtuuf. Akkam jirta Dessee koo ? fayyaa keetii ? Ani galata rabbii nagaa kooti. Si yaadeen karaan ittiin dhufee si argu dhabuun kootu namummaa koo gadi xuuxe malee. Harmee koo ati motora ani ittiin deemu,koochoo aani ittiin balal'u waan taateef fagaachuu dhiisee utuun du'ee garaa dachee keessa gadi fagaadheeyyuu sin dagadhu.
💚Waadaadhaan manaa waanan baheef utuun deemuu yoo aduun na jalaa lixxees karaan deemu natti argamuu didee yoo natti dukkanaa'ees kaayyoo koof waadaa kee baadheen achuma ciisee barii eeggadha malee fiigee sokkuuf jedhee imaanaa kee hin gatu.
✈️✈️Waan sagalee koo dhagahuu dhabdeef Mucaa kee ijaan arguu dhabdeef ilmi koo gudunfaa koo gate jettee hoomaa nan shakkiin. Natti roobus mataa koo muka jala qabadhee,saafaan yoo natti cimus gaaddisa barbaaddataan imaanaa kee galmaan gaha. "Waan gaariif karaaa qaxxaamuuraa argitee adara mucaa koo isa manaa baateef hin dagatiin" isa ati jette❌❌ sanatuu ija koo dura waan jiruuf guyyaa tokkoof illee jecha afaan kee keessaa bahu hin sharafu.
✅✅Rakkina dhiisee utuun boollatti gadi darbamee illee ani tokkichi kee isan manaa baheef karaatti hin buusu Abshirr Harmee koo.Ani ganamaaf galgala halkaniif guyyaa siin waanan yaaduuf waanan manaa baheef homaa tokko illee garaa koo hin hiru.
🏌🏌Abbaan koo imaanaa sitti waan kenneef imaanaa abbaa kootitu si harka jira anis imaanaa sanadha. Isati asiin na gahuuf jettee qoraan gogaa dugdatti baattee,bishaan tabba guddaa bahuuf nama dhibu sana dafqa kee isa akka dhiigaa facaasaa dadhabbii kee jabina koo keessaan ilaalaa isa ati naaf taate hin dagadhu.
🏆🏅🥇Oolmaa kee baasuudhaaf jechoota ani dubbadhuun waan wal madaaleefan haasa'a miti. Garaan koo waanuma yaade dubbatee akka aara galfatuufan dubbadhe.
Haga fedhe turus gaafa tokko dadhabbii keetiif gatii baasu deebisuu baadhus hamma danda'e garaa kee ciibsuudhaaf nama hanquu akkan hin taane irra deebi'een waadaa siif gala. Tabbi guddaan ana dura dhaabbatee akkan hin darbineef ana dhowwus gatii kaffaluun narra jirru hundumaa kaffalee aaran si galfachiisa. Karaan koo maqa baay'atus gaaf tokko lafan yaade nan gaha. Nagaa naaf tahi. Umurii naaf dheeradhu. Hamtuu kee galaanni haa nyaatu.
Tokkicha keeti Yuunivarsiitii Maqalee irraa.
Xalayaa keessan ergachuuf @GumaatAartiiBot yaada keessan dabarfadhaa.
3.2K viewsMiixuu Harmee, 16:33
Naafis gaaf tokko darba🥱
Heyyama kootiin miti
Kan jaalalli na waame
Fedha rabbii sanaani
Kan heyyamni kenname
Ati maaf na gaafatta
Jaalalli jaamaaf fayyaa
Ija tokkoon filatee
Ati qaawwa koo ilaaltee
qaroo koof na jibbita
Jaalalli kana hin beeku
Anaanis nii jaallata
Qaroon koo kennaa rabbii
Faaya uumaan na faaye
Ati badii koo gootee
Na arguun sitti ajaaye
Na jaalladhu siin jedhee
Waa'ee koo siif hin ibsuu
Kan fuuldura kee jirus
Achi qabee sin dhoksu
Qaroo koo jaamee malee
Mul'anni koo lafa arga
situu naan beekneef malee
Naafis gaaf tokko in darba
Waan Dubbiftaniif Galatoomaa
3.1K views@@@100//, 19:01
Dhidheessa guute ceenee
Angariin Sodaannaa ree
Bara darbituuf jennee
Yaada waal rarrafnaa ree
Hangaariinis ni ceena
Daaktus taatus barbaannee
Gaaf tokko wal argina
Akkuma taanu taanee
3.1K views@@@100//, 21:17
💚💚Waan hundumaa caalaa anaan kan na aarse kan na dhibes jaalala naaf qabdu na dhowwachuu kee utuu hin taane ana bira teessee nama biraa waamuu keeti. Kuni maaliif tahe ? Maal ta'a yoo dura natti himte ?. Sin jaalladhu garaan koo nama biraa bira jira yoo jette caba qabaa ?. Gaafa dura ani si jaaalachuu koo sitti himu atis akka na jaallattu natti himtee turte. Gammachuu guutuudhaan jaalala keenya waliin dhamdhamachuu eegalle.
🤭 namni hunduu jaalala keenya harka afaan irra kaa'ee ajaa'ibsifataa ture. Akkaataa nuti itti wal kabajaa turre xurii hin qabu. Jaalala dhugaaf ija qabu wal jaallanne. Si jaallachuuf si waliin jiraachuu kootiif guyyaa tokkoof illee gaabbii hin qabu. Atis akkasuma turte garaa kee keessaa bakki ati na duraa dhofkattu hin jiru. Jireenya koo keessatti si jaallachuu caalaa wanti na gaddisiise hin jiru.
🙅Sirraa adda bahuu haa turuu sittan mufadha jedheeyyuu yaadee hin beeku. Gara fuula duraatti haala kamiin jireenya keenya geggeeffaachuufi jiruu keenya mijeeffachuu daandeenyu irratti illee kokkolfaa yaadaaf qalbii qulqulluudhaan waliin mari'annee abdii tujubaa'eef qalbii ayaanomeen wal bohaarsaa turre. Jaalalli keenya mucucaatee kufa. Ni gatantaras jedhee garaa kootti yaadee hin beeku.
😎😎garuu guyyaa tokko mana bunaa bakka bashananaa gaaddisa jala teenyee utuu burraaqnuu bilbila kee banattee haasaan ani haasa'u dhageeffaachuu dhiiftee message barreessaa kan ati qofaa sesseqxun si hubadhe. Maal inni jedhees sin gaafanne hoomaa shakkiiis sirraa hin qabuf ture.
👆duraan bilbila kee na harkatti dhiiftee yoo galte iyyuu hoomaa garaa sin nyaatu ture. Erga dhihoo as na bira teessee iyyuu natti kennuun du'a caalaa sitti ulfaate. Kanan shakkee hin beekne garaan koo shakkii keessa seene. Si gaafadhee yaada kee hubachuufis tarii kan garaan kee hin yaadiin si gaafadhee natti gadditaa jedheen Sodaadhee callisuu filadhe.
🤷‍♀🤷‍♀Nan argiin ooltee buluun sitti salphataa dhufe. Yoon siif bilbilus bilbila koo narratti cufaa dhufte. Ani garaa sirraa kutachuu jibbeen yaadaan sitti rarra'e. Dhugaadhas shakkiis sirraa hin qabun ture. Jaalala nu gidduu jiruufis imala haaraa waan hin barbaadneef waan biraa haa turuu guyyaa gaa'eela keenyaa illee wal mar'iannee beellama qabannee waan turreefi.
🤦‍♂🧏 Guyyaa tokko garuu dhagahuufis arguufis waan natti ulfaatuti na mudaate. Hiriyyaa koo dhiiraa waliin bashananaaf baanee deemna ture. Lafti dhihee aduunis dimimmisee jira. Ati mucaa dhiheenya biyya alaatii gale tokkootti marmitee deemta. Hiriyyaan koo akka hin argiin darbuuf yaalii godhee ture garuu hin taane. Iji koo toph ! Jedhee sirra buhe. Dhugaa natti hin fakkaanne lafti duraanuu dhihee jira lammaffaa natti dhihe. Sitti fiigeen Leensee !! Leensee !! Maal taate ? Ani asan jiraam siin jedhe. "Deemi na biraa 🥱🥱. Ammayyuu siin gallee " naan jette.
🚶🚶🚶Gaddaanan si biraa deebi'e. Garaan koo madaa'e fayyuu danda'a tahee hin beeku. Qabeenya koo caalaa jaalalli ani siif qabu hundumaa siif caala ture. Erga jettee garuu haa tahu. Hiyyuummaan fedha koo miti. Duromuufis aduun natti hin dhiine. Filannoo itti gammaddu waan filatteef sitti haa tolu. Anis jaalala kee waanan hin booressiiniif garaan koo hin gaddu.
Nagaatti Jaalallee kee isa dhugaa sana M.O magaalaa Ciroo irraa.
Maaltu Haa sirratu ? Maaltu haa dabalamu ?
2.8K views@@@100//, edited 14:12
Forwarded from GADAA MAGAZINE
Ashamaa akkam jirtu?
Qaala'iisi jireenyaa amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru naannoo keessatti maal fakkaata?
@gadaamagazineBot irratti nuf barreessaa.
2.4K viewsRoba Amare, 17:09
..."utuun rakkina koo hin jibbiin garaa koon ofirratti jibbe" inni isheen naan jette mar'imaan koo na waade. Ani bakkan waan gaarii isheef godhee bara isheef dabarsuu malee rakkina rakkina caalu isheetti tahuun koo gadda kan biraa natti tahe. Barnoota kootiin alatti halkanii guyyaa ishee yaaduun koo miidhama kan biraa anatti ta'aa dhufe.
Waan hunduma isaa iyyuu tole jedhee fudhachuuf nan heyyame. Kana booda waanan irra deebi'ee akka waan kun hin taaneef falli ani godhu hin jiru. Waan nutti dhufe kana damdammachuudhaaf garuu furmaata barbaaduun akka narra jiru yaaduun eegale. Ani kanan baradhu Yuunivarsiitii Wallaggaatti ture maatiin koos qabeenya waan qabaniif baay'ee waan ani ija keessa ilaalus hin jiru. Waan hundumaa sa'aatii ani barbaadetti waan barbaachisuu naaf guutu ture.
Anis kanuma irraa kaheen waan tokko murteessuu eegale. Innis Mana kiraa fuudhee akka hojii dandeessu hojjetaa akka isheen jiraattun yaade. Akka natti ulfaatu nan beeka,garuu maal gochuun danda'a. Jaalalan isheef qabu qilleensa irratti hambisuun namummaa koo waan na duraa tuquuf akka barbaadde haa taatu jedhee dhiisuuf onnee isheen jaalalaan bitatte sun tole hin jenne.
Turtii torban tokkoo booda deebiseen bilbileef,,"isheen erga guyyaa sanaatii yoom argine;naannootti iyyuu arginee hin beeknu" naan jedhan. Ammas hiibboo kan biraa natti fide .
Amma akka duraanii tahuu nan dhiise, maaltu na dhibe jechuudhaan gara hojii kootiitti yaada koo deebifadheen barnoota koo barachuun eegale. Nan dhiisa yoon jedhes,garuu yaadni ishee na keessaa hin badu ture. Xiqqoo muddamuufi yaadda'uu guutummaa guutuutti dhiiseera jechuuf nan danda'a.
Abbaan kiyya naaf bilbliee akkam Siddisee quba qabdaa jedhee yeroo baay'ee na gaafata. gocha isaanitti aaree waanan jiruuf hin beeku jedheen dhiisa. Achi jirti as jirtii ishee utuun hin beekiin barnoota koo Simisteera duraa Xumure. Boqonnaadhaafis biyyaa galeen deebi'e. Barnoota marsaa lammaffaa jalqabuuf utuu jennuu guyyaa tokko naaf bilbilame. "Hospitaala dhuunfaa Abdii Faarmaasiitti kottu firri kee tokko si barbaadaa" naan jedhan. Siddiseetu Dahumsaaf deeme achi jira jedheen itti qajeele. Waan isaa hubachuu hin dandeenye sammuu kootti akka malee na ulfaata.
Akkuman achi gaheen gara dubartoota Dahumsaaf dhufaniittin ol seene ilaallaan keessa hin jirtu. Ammas deebiseen namichaaf bilbile "as geessee ? Kutaa balaa tasaa kottu" jedhe. Amma kan duraanii baay'ee hin rifannee amma hollannaadhaaf iyyuu deemee achi gahuun dadhabe. Keessi koo kan duraa caalaa na raafame. Amma ishee mitii laata jedhee nama biraa ta'aa laata jedhee yaadadhuma itti ol seene.
Yaadaaf qeeqa keessaniif
2.9K views@@@100//, 05:48
Si fudheen dhidhima
Hin kolfu nan seesseqa
Hasaaseen waa sitti himaa
Biyyi kun naaf hin taanee
Si fudhadheen dhidhimaa
Yaandoo roobee bonaanii
Qaqqawwee waliin dhahee
Ati maaliif na gatttee
Ani siifan biyyaa bahee
2.6K views@@@100//, 05:37
Seenessaa Gabaabaa Kutaa 12ffaa
.... Falmataan utuma Akkoo isaa ilaaluu teessoo irra taahu irraa lafa dhahe. "a'aa anaan lafaan haa dhahu,inni ani sodaadhe hin oolle;tokko kana sodaan koo" jettee bakka teessuu kaatee Falmataa ol qabdee ofitti hirkiftee bira teesse. Garaa kootti haa hafu,yoo hafes wayya jennaan na didde. Kunoo balaa biraa keessa of buufte sittis aaran galfadha jennaan kanan dagadhe na yaadachiiftaa ? jettee Falmataatti mufataa lafaa ol kaaftee ofitti hirkifte.
Falmataan naasuudhaan gaggabee xiqqoo hafuurri itti deebinaan "Akkoo maaliif waan walxaxaa akkanaa kana na dhaggeessifta ?. Kun akkamitti tahuu danda'a ?. Abbaan koo akkamitti kan harmee koo ajjeefte fuudha ?. Kuni tasumaa ni yaadama ?. Moo maaliif ati kana natti himta ?" Jedheen . Yaa mucaaa koo !!. Ani durseen akka ati dhagahuu hin barbaadne mala maleen dadhabe. Ati garuu;na dhagahuu waan diddeef fedhii kee eeguuf jechan waan gurra namaatti hin tolle. Waan safuuf aadaa keenya keessatti Araamuu !! tahe sitti himuuf dirqame. Umurii koo guutuun waan rakasaaf kisaaraa akkanaa mar'imaan kootti qabadhee jiraadhe.
Ati amma dubbii na duraa hin balleessiin; kan tahee hunduu qaata darbe har'a haaraa goonee wanti keessa deebinuuf hin jiru. Atis baga utuu waan isheen sirratti yaadde hin raawqatamiin baga jalaa baate malee; kana booda ati achiis fira hin qabdu. Obboleessi kee, Obboleettiin kee warra ati waliin dhalattee,warra ati gadameessa tokko keessaa waliin baate caalaa,haadhoo kee kan garaa keetii kan siif tahu nama jireenya kee guyyaa guyyaa keessatti baatee galuu keef teessee ka'uu keetiif nama waan gaarii siif yaadutu fira kee siif danda'a.
Na waliin dhalattee, gadameessa tokkotu nu baate jechaa bahuuf galuu keetiif boolla siif qota yoo tahee obboleessa kee tahuu hin danda'u. Kun diina keeti malee fira kee siif tahuu hin danda'u. Atis mucaa koo kana beekkadhuutii kan darbeef aartee garaa of hin dhukkubsiin firas hin qabu hin jedhiin" jettee mataa isaa qaqqabaa Falmataa gorsite.
Falmataanis gorsa Akkoo isaa dhaggeeffatee dhuguma jette jedhee garaa isaatti qabate. Falmataan garuu;dubbii Akkayoon isaa itti himte sana amanuun itti ulfaataa ture. Kan duraanii caalaa keessi isaa jeeqamuu eegale. Akkamitti abbaan koo nama haadha koo ajjeefte waliin jiraataan garaa isaa gubuu eegale.
Dhugumas waan garaa nama gubudha. Barnoota isaas dhiisee waan akkoo isaa bira deemeef achumatti akka eegaluuf deemtee haala isaa hoggantoota mana barumsaatti haasofte. Isaanis tole jedhaniifi booda irraan akka waraqaa isaa fiduuf walii galani.
Abbaan isaas hojiidhaan baay'ee waan muddamuuf deebi'ee dhufee isa hubachuu hin dandeenye. Falmataan garuu Abbaan qaba jechuu iraa garaan isa citee jira. Abbaa isaa yoo arges araaramuufi akka hin dandeenye garaan isaa amanee fudhateera.
Waan Dubbiftaniifubbiftaniif Galatoomaa .
Falmataan mana abbaa isaa diigaa laata ?.
Hin beekamu guyyaatu deebisa. Hordofaa.
Yaada yoo qabaattan @GumaatAartiiBot nun gahaa
3.2K views@@@100//, 16:10
Buna aramuu hin dhiisu
araada isaa hin obsadhu
Sirraas fagaadhee hin hafu
waa'ee koos sin dhofkadhu
Agadaa birraa malee
Gannaa soomoti hadha'aa
Siin yaaduu yoon dagadhe
nyaanni koo hin dhagagaa'aa
Jirbii hiddeen siif ergaa
Gomboo dhayii naaf fidi
Alagaaf tole hin jedhiin
1.3K views@@@100//, 17:34
Seenessa Gabaabaa Kutaa 12ffaa
.... Akkuman itti ol seenen utuun asiif achi hin mil'atiin qixuma iji koo ilaaleen,iji koo toph jedhee Siddisee irra na buufate. Siddisee koo!!; Utuma natti hin himatiin qofaa kee dhokkattee mana kana dhuftee jedheen dhaqee irratti kufe. Dookteroonnis miira koo ilaalanii calluma jedhan na ilaalan. Maal taate tokkitti koo !! Maaloo Siddii nagaadhaa naan jedhi kaa ani Si yaadeeraa jedheen irratti kufe. Hoomaa Siddiseen na jalaa dubbachuu didde. Mar'imaan koo dakaaf gubbaatti baasee na waxalame. Keessi koo na waadame.
Dokterri dubartiin tokko "dhiifama Obboleessoo baay'ee dadhabdee jirtii,Alkooliis fudhataa jirti waan taheef; xiqqoo hamma of bartutti tasgabbaa'i ni fayyiti waan ta'eef hin yaadda'iin " naan jettee qabdee na teesifte. Tole jedheen ofirra gadi taa'e. Xiqqqoo hafuura fudhadheen gara dookterittiitti siqee maal taate jedheen gaafadhe. "Mucayyoon Carraa guddaa qabdi. Konkolaataa isheen keessa turte keessaa nama 5n lubbuun darbee jira Namoota saddeetti miidhaa garagaraatuu irra gahe. Isheen garuu kana hunda keessaa milla ishee tokkotu miidhame. Innis yaalamee fayyuu danda'a. Wanti xiqqoo nama naasisu garuu daa'ima garaa keessa jirudha" jette. Imimmaan qabachuun dadhabe. "Ani waanan dadhabu hin jiru,gaariinis aariinis anarratti wal qaba. Ani dacheedha " inni Siddiseen koo jechaa turte akka waan harka qabuu laphee koo na luqqaase.
Yaadni ulee fuudhee asiif achi oofee na tume. Namni narraa qabus ni dhabame. Maali daddarbannaan akkanaa ?. Siddiseedha yoo tahee akka nama gara jabeessa tokkoottuu garaan ishee namatti hin jabaatu. Maaliif waan hundumtuu ishee irratti wal gaha. Dubbattee nama hin maddeessitu. Waraantee nama hin quuqxu. Loltee nama hin aarsitu. Maaliif waan hundumtuu isheerraatti wal gaha. tole yoos garaa haa jabaattuu ree ?. Mee isinumti murteessaa kaa ani waan isaa walaalee. Iji koo akka rooba arfaasaatti imimmaan wal irraa hin cinne gadi dhangalaase.
"Dhiisi hin boo'iin ilmi dhiiraa akkas hin boo'u. Maaliif akka waan isheen duutee garaadhaa baafattee boossa ?. Akkuma gaariin jiru;guyyaa tokko tokko immoo wanti hamaanis nu mudata. Waan dhufe hundumaa danda'uun nurra jira. Isheen amma nagaadha. Utuu isheen kana caalaa miidhamte ta'ee akkam taata turte." Jettee Ogeettiin ishee yaalaa jirtu sun Sammuu koo diigame ijaaruu eegalte. Anis dhugaa jette jedheen of suphuu eegale.
Garaa koo keessaa kan taa'uuf dhaabbachuu kan na dhowwe isa isheen "wanti xiqqoo nama naasisu garuu daa'ima garaa jirudha " isa isheen jetetu akkaataa na walaalchise. Daa'imni garaatti miidhamte moo garaadhaa baasan laata waan isaa naaf galuu dide. Gaafachuufis natti ulfaate. Waanan dubbadhu walaaleen xiqqoo dhaggeeffadhee gara Dookterittiitti siqeen gaafadhe.
"Hoomaa miti. Ammaaf nagaadha. Yoo miidhamni qunnames daa'ima baqaqsinee yaaluudhaan fayyaa haadhaa oolchuu ni danda'ama." Jette. Fagoon natti dhiyaate. Dhihoon natti fagaate. Teessoon na baatee jiru na jalaa socho'e. Lafti ani irra jiru na dadhabe. Manni ani keessa jiru natti dhimmise. Abdiin koo na jalaa harca'e.
Gadi jedheen dafqa koo of irraa haxaawwataa jira. "Obsaa na qaqqabattee " jette Siddiseen mataa ishee ol qabdee. Sagaleen ishee gadi bu'ee jira. Jilba koo qabadhee lafaa ka'een dhaqee bira gad taa'ee dhufeera Siddisee koo ooltee ?? Baga Waaqayyoo si gargaare jedheen adda ishee irra dhungadhe. A'aa jettee Seeqxee ilkaan ishee kolooloo sana na argisiiftee. "Ammas anuma caccabde kana jaallattaa ?" Ija isheetti imimmaan guute. Een sin jaalladha. Ati naaf guutuudha Sin jaalladha jedheen itti marame. "Waan hunda dhabus bagan si qabaadhe, rakkadhus bagan si jabeeffadhe, galaanni qofaatti argatee yoo na nyaates,si waliin taanan nan nyaatu naaf jiraadhu." Jette.
Waan Dubbiftaniifubbiftaniif Galatoomaa.
1.3K views@@@100//, edited 17:35
Yoo ulfaates baadhadhee
Jirma dugda na kute
Nan jiraadha fira koo
🥱Share 👆Like 👍Comment ✍
1.2K views@@@100//, 19:38
Iddoon ati har'a jirtu,bakka ati booru itti argamtu miti.
Guyyaan hundumtuu carraa guddaafi Sadarkaa guddina koo kan dabalanidha jedhii yaadi. Kisaaraa yaadaa keessa hin seenin. Salphina akka ulfinaatti hin fudhatiin. Hin yaadda'iin;dukkanni kee har'aa itti hin fufuuti. Namoonni abdii si kutachiisan baay'ee tahuu danda'u. Ati garuu yoomillee ofii keetiif ilaalcha gaarii qabaadhu. Harka hin kennin. Ija hin laafiin hunda hin sodaatiin.
Gadda boodatti si deebisu keessa hin seeniin. Nama boorii akka taate hin dagatiin. Guyyaan borii ulfina baatee si eegaa jira. Ati nama abdii kutatee lafa har'a jirutti hafuu hin dandeenye akka taate hubadhu. Baga addunyaan nama akka keetii qabaatte. Si malee addunyaan guutuu miti. Hir'inni kee addunyaa kana baay'ee boodatti hambisa. Iddoon ati har'a jirtu, bakka ati bor itti argamtu miti.
Kitaaba G/p Miratuu Shaanqoo(Siif Galeeraa ?)
1.2K views@@@100//, 21:49
Siin Hin jijjiru
Amartiin koo bututee
Qubeelaan koo yoo cabe
Agartuu koo yeroo hundaa
Fageenyaan yoon si dhabe
Siif abdiin koo nan dhumu
Galaa kee kuufadheera
Simboo natti urgeessiteen
Barri koo naaf darbeera
Fagaateef siin hin dhabu
Guyyaan waliin nu gahaa
Fooliin kee natti urgahaa
Jiruu dachee kanaatuu
Nu oofe bitaaf mirgaa
Har'aaf wal dhabne malee
Booru nuti dursee wal argaa
Fagaadhef hin yaadda'iin
Sii dhiisee garaa hin hiruu
Kumaatamni naaf dhufus
Ani siin nama hin jijjiru
1.0K views@@@100//, 16:03
Barraaq irribaa ka'ee
Waa'eema keen yaada
Nagaaf tasgabbii dhabee
Eessa buuteekeen dhabe
Sindhabe iddoo maraa
Guyyaaf halkan joora
Yaadaaf qalbiin cabeen
Dhukkuba ofitti hora!
Aduu bokkaa hinjedhu
Sidhabee jiraachuun fafa
Kan gargar nu diige
Nama miti bofa!
Natti taate haxxee!
Utuun sitti hin bu'in
Afaan dhama baasaa
Kophaa na hambiste
Rabbis kan abaare
Anis sin abaara
735 views👑 "SUUF" 👑 ❤❤💚💚❤❤, 07:23
Forwarded from Gadaa Promotion
Odeeffannoo dhugaa Afaan Oromoon argachuuf chanaalaa armaan gadii #cuqasuun itti dabalamaa.👇
298 viewsRobI A, 17:04
Oromia Media Network- OMN
ETV Afaan Oromoo